Izindaba - Izimpendulo zemibuzo mayelana nokunemba kwensimbi
Izimpendulo zemibuzo mayelana nokunemba kwensimbi
1. Hlobo luni lwezinto ozidingayo ukuze usebenzise i-etching die?
A: kuya ngomkhiqizo nangezici ezibonakalayo. Imikhiqizo engashaywa ngesibhakela ngokuqhubekayo ingasebenzisa umshini wokusika othomathikhi (onemisebenzi eyinhlanganisela), njengokuthi: itheyiphu yokunamathisela emaceleni amabili, ishidi lokusabalalisa, isibonakaliso esisetshenziswe kwimikhiqizo yedatha ye-elekthronikhi; umnyango owodwa womkhiqizo usebenzisa i-hardware punch, i-punch hydraulic, umshini wobhiya webhokisi lemibala, i-manual desktop punch, njll.
2.Uklama kanjani isikhunta sethuluzi nezinyathelo zokuzivikela?
Impendulo: ngokuvamile ngokusho kwemidwebo yekhasimende nemidwebo (1: 1) ukwenza isikhunta sethuluzi. (uma imfuneko yokunemba ingekho phezulu, amasampula anganikezwa). Ubukhulu nezindawo zento enqunywe yikhasimende zinquma inqubo yokukhiqiza yedaysi (njengokuthi: ukuphakama kommese, ummese ohlangothini olulodwa, ummese ophakeme nophansi, ummese wokufakelwa kabili wensimbi, njll.).
3. Amandla okukhiqiza nobubanzi besikhunta sethuluzi?
Impendulo: isikhunta sethuluzi singenza zonke izinhlobo zehluzo ezingajwayelekile, futhi ukubekezelelana komkhiqizo kunganemba ngaphakathi kwe- ± 0.03mm. Isetshenziswa kabanzi ebhodini lesifunda eliguquguqukayo, izinto zasendlini, omakhalekhukhwini, izingxenye zezimoto, imikhiqizo yedijithali, imboni yokuphrinta neyokupakisha, imikhiqizo yepulasitiki, i-gasket ye-elekthronikhi, amathoyizi onodoli, ukuzinamathisela neminye imikhakha. Inqubo yokusebenza yenkampani yethu yamahora angama-24 iqinisekisa ikhwalithi nokusebenza kahle, futhi iqinisekisa ukulethwa ngesikhathi.
4. Umjikelezo wokukhiqizwa kwesikhunta sethuluzi?
A: uma kwenzeka i-oda eliphuthumayo, ngokuya ngosayizi womkhiqizo, ukuthunyelwa kungahlelwa ngokushesha emva kwamahora ama-4 ngemuva kokuthola i-oda (isiqinisekiso sekhotheshini siyathunyelwa emuva). Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, izimpahla zingalethwa ngosuku olulandelayo.
5. Ithuba lokujula kokulawulwa kwesibhakela ngethuluzi lifa?
Impendulo: ithuluzi lokufa lokusika umsebenzi wokuvala umsebenzi wokuhlola ukulungisa iphutha, isipiliyoni sinquma umphumela womkhiqizo. Ukuphakama okuphezulu kwe-die etching kungaba ngu-2mm. Uma okokusebenza kukhulu kakhulu futhi kunzima, imbobo yokuvala isikhala iyavuleka futhi igebe lincane kakhulu, akunconywa ukusebenzisa isikhunta sethuluzi lokufaka, kepha ukusebenzisa isikhunta sethuluzi lokuqopha. Intambo eyonakele yesikhunta sethuluzi lokufaka izinto ayikwazi ukulungiswa, futhi isikhunta sethuluzi lokuqopha singaphinde sisetshenziswe ukuze silungiswe.
6.Umthamo wokukhiqiza nobubanzi besicelo sokuqoshwa kwethuluzi lesikhunta
A. ithuluzi lokuqopha die lingasetshenziselwa ukugxisha izinto eziqinile nokuqina kobunzima (okufana ne-EVA foam, isiponji, zonke izinhlobo zepulasitiki, ifilimu le-mica, izinto zokuvikela, njll. ummese ohlangothini olulodwa no-0.6 mm womgodi wokuvala. Ummese ophakeme nophansi, ummese ohlangothini olulodwa, ukuphakama kommese okuhlukahlukene (okufana nezinto eziyi-8mm) kungaba yi-5mm noma ngaphezulu. Inzuzo enkulu kunazo zonke ukuthi izikhathi zokunyathela ziphakeme futhi i-blade ingalungiswa yindilinga.
I-Rotary Die ekhipha udoti, Steel Die eqopha, Auto-Material Ukugcwalisa eqopha Die, Mirror Surface eqopha Die, Laser Die, Imaski Rotary Die,